Saldhigga ciidamada AMISOM ee degmada Balcad oo Weerar madaafiic ah lagu qaaday.
0 Wednesday June 10, 2020 - 08:22:51
Dagaalyahanno katirsan Al Shabaab ayaa xalay weerar xooggan ku qaaday saldhig ay ciidamada shisheeyaha AMISOM ku leeyihiin degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe.
Mareykanka oo Farmaajo ku cadaadinaya in uu la heshiiyo maamul goboleedyada.
0 Wednesday June 10, 2020 - 06:48:54
Dowladda Mareykanka ayaa bilaawday in ay cadaadis siyaasadeed ku saarto dowladda Farmaajo wada xaajood ay lafurto maamul goboleedyada shisheeyaha la shaqeeya.
Al Shabaab oo sarkaal ciidan ku dishay gudaha magaalada Baydhabo.
0 Wednesday June 10, 2020 - 06:16:59
Wararka ka imaanaya gobolka Baay ayaa sheegaya in weerar hubaysan lagu dilay sarkaal sare oo katirsanaa ciidamada maamulka isku magacaabay Koonfur galbeed.
Madaxweynihii Burundi oo si lama filaan ah udhintay.
0 Wednesday June 10, 2020 - 05:56:26
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Burundi ayaa lagu sheegay in uu si lama filaan ah udhintay madaxweynihii wadankaasi.
Heshiiska Abiy Axmed iyo Farmaajo wax ka ogow
0 Tuesday June 09, 2020 - 18:04:20
Itoobiya oo waligeed u xusul duubaysay qabsashada dekadaha iyo kheyraadka ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa waxa ay u muuqataa in ay heshay hoggaamiyeyaal habacsan oo iyada ucaynsan.
Diyaarad ay leeyihiin ciidanka Mareykanka oo shil ku gashay dalka Ciraaq.
0 Tuesday June 09, 2020 - 18:03:20
Wararka ka imaanaya wadanka Ciraaq ayaa sheegaya in diyaarad Melleteri oo ay leeyihiin ciidanka Mareykanka ay shil ku gashay meel ku dhow magaalada caasimadda ah ee Baqdaad.
0 Tuesday June 09, 2020 - 12:28:24
Dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horraysay ka hadashay warkii kasoo baxay Faransiiska ee ahaa in howlgal ka dhacay waqooyiga Maali lagu dilay Amiirkii Al Qaacidada Maqribul Islaami.
Boqolaal katirsan Maxaabiista Taliban oo lagasii daayay xabsiyo kuyaal Afghanistan.
0 Tuesday June 09, 2020 - 12:27:34
Waxaa wali sii socda maxaabiis iswaydaarsiga udhaxeeya Taliban iyo Mareykanka si loo fuliyo qodobadii lagu kala saxiixday heshiiskii ka dhacay magaalada Dooxa ee dalka Qadar bishii Maarso ee lasoo dhaafay.
Guddoomiyihii Aqalka Sare ee dalka Itoobiya oo iscasilaad ku dhawaaqay.
0 Tuesday June 09, 2020 - 12:01:55
Haweenay jago sare ka haysay dowladda Itoobiya kanasoo jeeda qowmiyadda Tigreega ayaa si lama filaan ah shaqadii ay haysay isaga casishay.
Ciidamada Kenya oo gubay gaari Bagaash u waday ganacsato Soomaaliyeed.
0 Tuesday June 09, 2020 - 11:49:01
Wararka ka imaanaya dhulka NFD ee ku jira gumeysiga dowladda Kenya ayaa ku waramaya in ciidamada Kenya ay gubeen gaari xamuul ah oo bagaash kala duwan u siday ganacsato Soomaaliyeed oo ku nool dhulka NFD.
Kooxo Burcad ah oo magaalada Cape Town ku dilay ganacsade Soomaali ah.
0 Tuesday June 09, 2020 - 11:43:08
Dalka Koonfur Afrika waxaa wali kasii socda beegsiga lagu hayo ganacsatada Soomaaliyeed ee halkaas u shaqa tagay.
0 Monday June 08, 2020 - 20:50:10
Diyaarado nuuca qumaatiga u kaca ah oo Hay'adda beeraha Q.Midoobay ay dhowaan ugu deeqday dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada kajira dalka ayaa dhibaato ka geystay bartamaha Soomaaliya.
Dagaallo culus oo ka bilaawday magaalada Sirta ee dalka Liibiya.
0 Monday June 08, 2020 - 20:39:25
Dagaallo culus ayaa dib uga qarxay qeybo katirsan wadanka Liibiya oo ay ka socdaan loollan melleteri oo aad udaran.
0 Monday June 08, 2020 - 12:11:38
Dhacda xanuun badan ayaa saaka ka dhacay mid kamida xaafadaha degmada Hodon ee magaalada Muqdisho.
Waxa ka socda Jabuuti saameyn maku yeelan karaan maamullada kale ee soomaalida?
0 Monday June 08, 2020 - 11:23:11
Waddanka yar ee jabbuuti layidhaa waxa ka bilaabmey dibad baxyo lagu dalbanayo caddaalad. Dibadbaxyadani waxa ay ka dhasheen kadib markii askari duuliye ahaa oo reer jabbuuti ah lagu xidhey musqul ama suuli.Taas oo ka baxsan dhaqanka soomaalida.
0 Monday June 08, 2020 - 10:35:28
Sida aad sawirada ku aragtaan xaflad heer sare ah ayaa ka dhacday gobolka Baay xafladaas oo beesha Luwaay ay ku dooranaysay Ugaas cusub.
Dadka uu Carona Virus ku dilay caalamka oo gaaray 400 kun boqol oo qof.
0 Monday June 08, 2020 - 10:29:08
Caabuqa dilaaga ah ee Carona Virus ayaa wali caalamka kasii wada halaagga daran ee uu ugeysanayo bani'aadamka si aan kala sooc laheyn.
0 Sunday June 07, 2020 - 16:04:32
Dagaal ooge Khaliifa xaftar oo dhabar jab weyn lagu gaarsiiyay dagaalka ka holcaya wadanka Liibiya ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay in uu udhega nuglaaday baaqdyada caalamiga ah ee ku boorinaya ka qeyb galka dadaallada dib uheshiisiinta.
0 Sunday June 07, 2020 - 15:50:59
Dagaallo beeleedyo hor leh ayaa markale dib uga qarxay deegaanno katirsan gobollada Hiiraan iyo Galguduud ee bartamaha dalka Soomaaliya.
0 Sunday June 07, 2020 - 15:48:48
Iskusoo baxyo ay soo agaasintay madaxtooyada Dowladda Federaalka ayaa maanta ka dhacay qaar kamid ah xaafadaha magaalada Muqdisho ee kuyaal xayndaabka dowladda.
Sarkaal ciidan iyo guddoomiye waaxeed lagu dilay magaalada Muqdisho.
0 Sunday June 07, 2020 - 12:24:59
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dilal saacidihii lasoo dhaafay ka dhacay xaafado katirsan degmooyinka gobolka Banaadir.
Mareykanka oo weerar xagga ah cirka ah ku beegsaday dagaalyahanno katirsan Taliban.
0 Sunday June 07, 2020 - 11:48:07
Wararka ka imaanaya wadanka Afghanistan ayaa sheegaya in duqeyntii ugu horraysay uu Mareykanku ku beegsaday dagaalyahanada Taliban tan iyo markii ay dhaqan gashay xabad joojintii wadankaas looga dhawaaqay horraantii bishan Shawaaal.
James Swan oo bogaadiyay buuqii Baarlamaanka ee ka dhanka ahaa Farmaajo.
0 Sunday June 07, 2020 - 10:58:03
Ergayga waxa loogu yeero Q.Midoobay ayaa si diirran usoo dhoweeyay falkii fowdada ahaa ee shalay lagu carqaladeeyay khudbad uu jeedin lahaa Max'med Cabdullaahi Farmaajo.
0 Saturday June 06, 2020 - 19:49:04
Khasaara lixaad leh ayaa dhabarka loo saariyay maleeshiyaad amxaara kalkaal ah xilli ay ku sugnaayeen deegaan kaabiga ku haya magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
0 Saturday June 06, 2020 - 19:48:04
0 Saturday June 06, 2020 - 09:19:07
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weeraro markale ciidamada Xabashida Itoobiya lagula beegsaday deegaanno katirsan gobolka Baar ee Koonfurta dalka Soomaaliya.
0 Saturday June 06, 2020 - 09:15:16
Wararka ka imaanaya wadanka Jabuuti ayaa sheegaya in dibad baxyo rabshado wata ay gilgileen magaalooyinka waaweyn ee wadankaas waxaana loogasoo horjeedaa maamulka Ismaaciil Cumar Geelle.
« Prev1 ... 891011121314 ... 359Next »